१९ माघ २०७७, सोमबार ०५:५३
गगन थापा–नेता नेपाली कांग्रेस
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई कांग्रेसले असंवैधानिक मात्र होइन, प्रतिगामी कदम भनिरहेको छ । हाम्रो संविधानमा संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नराख्दा नराख्दै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही संविधानमा छ भनेर संसद् विघटन गर्नुभएको छ । आजको यो अवस्था सदर भयो भने, आजको यो अवस्था मान्य भयो भने त्योसँगसँगै यो संविधान अमान्य हुने कुरा पनि त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ । त्यसैले आज तपाईं संसद् विघटनको पक्षमा हो कि चुनावको पक्षमा ? भन्ने प्रश्नै गलत छ । तपाईं नेपालको संविधानको पक्षमा हो कि होइन ? अहिलेको प्रश्न यति मात्र हो । संविधानको पक्षमा उभिनु भनेको यो व्यवस्थाको पक्षमा उभिनु हो । व्यवस्थाको पक्षमा उभिनु न्यायको पक्षमा उभिनु हो । न्यायको पक्षमा स्थायित्वको पक्षमा, नेपालको भविष्यको पक्षमा उभिनु हो ।
प्रधानमन्त्रीले भगवान्को नाममा शपथ खान मान्नु भएन । आज पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र छिरेर तपाईं र मेरो भावनासँग खेल्न खोज्ने ? कहिले तपाईं र मेरो देशभक्तिको भावनासँग खेल्न खोज्ने । कहिले तपाईं र मेरो भगवान्सँगको आस्थामाथि खेल्न खोज्ने । तपाईं र म खेलिने अनि हाँसेर बस्ने ? थपडी बजाएर बस्ने ?
प्रधानमन्त्रीले आज जनताको ठूलो अपमान गर्नुभएको छ । देशभरिको पार्टी प्यालेसमा प्रधानमन्त्री हिँड्नुभएको छ । राति घर पुगेपछि आजभोलि तपाईंहरु हास्यव्यंग्यको कार्यक्रम हेर्न हुन्न, प्रधानमन्त्रीले कहाँ के बोल्नुभयो भनेर खोजेर हेर्नुहुन्छ । कतिपय थपडी बजाएर हाँस्नु पनि भएको होला । प्रधानमन्त्रीको व्यंग्यमा हाँस्दै गर्दा एकपटक सम्झनुहोला, प्रधानमन्त्रीले हँसाउनुभएको होइन, हेप्नुभएको हो । तपाईंलाई हेपेको, सिंगो देशलाई र जनमतलाई हेपेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिसमा के लेख्नुभएको छ ? कोरोनाको संक्रमणको बीचमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेकाले दुईतिहाइ चाहियो, त्यसैका लागि मैले संसद् भंग गरेको हुँ भन्नुभएको छ । जतिखेर लकडाउन भनेर तपाईं, हामीलाई सरकारले घरमा थुनेर राखेको थियो, त्यति बेला प्रधानमन्त्रीका सेनामेना सांसद् अपहरण गर्न जनकपुर गएका थिए । प्रधानमन्त्री ९ महिनासम्म सिंहदरबार टेक्नु पनि भएन । मास्क लगाएर भन्नुभयो, म अस्वस्थ छु, म आउन सक्दिनँ । तर, संसद् भंग गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भ्याइनभ्याइ छ ।
हिजो केपी ओली र मैले संसद्मा शपथ खाँदा मैले ईश्वरको नाममा शपथ खाएँ । मैले मेरो ईश्वर सम्झिएँ । प्रत्येक आ—आफ्नो भगवान् सम्झने हो । तर, प्रधानमन्त्रीले भगवान्को नाममा शपथ खान मान्नु भएन । आज पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र छिरेर तपाईं र मेरो भावनासँग खेल्न खोज्ने ? कहिले तपाईं र मेरो देशभक्तिको भावनासँग खेल्न खोज्ने । कहिले तपाईं र मेरो भगवान्सँगको आस्थामाथि खेल्न खोज्ने । तपाईं र म खेलिने अनि हाँसेर बस्ने ? थपडी बजाएर बस्ने ? तपाईं, हाम्रो मतको अपमान गर्दैगर्दा हामी हाँसेर बस्यौँ भने जो प्रधानमन्त्रीको व्यंग्यमा हाँसेर बस्छ, उसलाई इतिहासले धिक्कार्छ । म यो कुरामा प्रष्ट छु, भोलि नेपालको इतिहास पुस्तक लेखिँदै गर्दा जब पुराना शासकहरुको नाम लेखिन्छ ।
कुनै पाना, जसमा नेपालमा जनताको पक्षमा लडेको शासकको नाम लेखिएको हुन्छ, त्यो पानामा न माथि न तल, कहीँ पनि केपी ओलीको नामका लागि ठाउँ रहने छैन । मलाई चिन्ता त्यहाँको होइन । चिन्ता गर्नुपर्ने आफ्नै बारेमा हो । हामी नेपाली कांग्रेस पार्टीका सदस्यहरु हौँ । नेपालको स्वाधीनता, स्वाधीन नेपालभित्र नेपालीको स्वतन्त्रता, उसले प्राप्त गर्ने समान अवसर र उसको सम्मान । यसकै लागि हाम्रो पार्टी बनेको हो । यसका लागि जनताको शासन चाहिन्छ । जनताको शासनका लागि संविधानको शासन चाहिन्छ । संविधानको शासनभित्र रहेर हामीले जनताको ती अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कांग्रेस पार्टी बनेको हो । एउटा पार्टीको जीवनमा चुनाव आउँछ । कहिले हारिन्छ, कहिले जितिन्छ । तर, चुनाव मात्र सबै कुरा हो, सिंहदरबार, शीतलनिवास, बालुवाटार जाने मात्र सबै कुरा हो भने यो पार्टीका संस्थापक नेताले कांग्रेस पार्टी खोल्नु हुन्नथ्यो ।
नेपालमा केपी ओलीले भन्नुभएकोजस्तो सेटिङको शासन छैन । संविधानको शासन छ । संविधानको शासन भएको ठाउँमा श्रीमान्हरुले पनि दायाँबायाँ केही गर्न पाउनु हुन्न, गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अदालत स्वतन्त्र छ, अदालत स्वछन्द छैन । अदालत स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन । अदालतले सर्वोच्च भन्ने पद प्राप्त गरेको संविधानमा लेखेर होइन, आफ्नो भूमिकाबाट हो ।
कांग्रेसको प्रष्ट कुरा छ, प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम हो । अब अदालतले के गर्छ ? अदालतले जान्ने कुरा हो । तर, यति कुरा कांग्रेसले प्रष्ट भन्न पाउँछ । हामीले पढ्ने संविधान र ‘श्रीमान्’ले पढ्ने संविधान एउटै संविधान हो । जुन संविधान हामीले लेख्यौँ, त्यो संविधान पढेर प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यो कदम असंवैधानिक हो भनेर भन्यौँ । हामीलाई विश्वास छ, सर्वोच्च अदालतको श्रीमान्ले पढ्ने पनि त्यही संविधान हो ।
नेपालमा केपी ओलीले भन्नुभएकोजस्तो सेटिङको शासन छैन । संविधानको शासन छ । संविधानको शासन भएको ठाउँमा श्रीमान्हरुले पनि दायाँबायाँ केही गर्न पाउनु हुन्न, गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास हो । अदालत स्वतन्त्र छ, अदालत स्वछन्द छैन । अदालत स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन । अदालतले सर्वोच्च भन्ने पद प्राप्त गरेको संविधानमा लेखेर होइन, आफ्नो भूमिकाबाट हो । पञ्चायतको कालरात्रिमा पनि सर्वोच्च अदालत जनताको पक्षमा उभियो । हाम्रै नेता शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंहलाई थुन्न राजाले शाही आयोग बनाउँदै गर्दा यही सर्वोच्च अदालत हो, जसले शाही आयोग खारेज गरेर राजाको मुखमा राजाको निर्णय फर्काइदिएको हो । यो सर्वोच्च अदालतबाट आज हामी त्यही कुराको अपेक्षा गरिरहेका छौँ ।
सर्वोच्च अदालतले त्यो सर्वोच्च हुने कुराको मान, प्रतिष्ठा राख्छ । प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनुभएको राष्ट्रपतिले आफ्नो संस्थाको मर्यादा राख्नसक्नु भएन । आज हामी कसको मन दुखेको छैन ? हामी कसैलाई पनि राष्ट्रपतिका बारेमा यसरी चर्चा गर्ने रहर होइन । राष्ट्रपति प्रथम नागरिक हो । राष्ट्रपति कुनै पार्टी, समूहको हुँदैन । राष्ट्रपतिले संस्थाको मर्यादा राख्न नसक्दा आज गणतन्त्रका लागि लडेका हामीलाई दुःख लागेको छ । शिर निहुरिएको छ । हामी अदालतको सर्वोच्चताका लागि लडेका मानिसहरु अदालतको मानका बारेमा चिन्तित छौँ ।
जुन दिन उहाँहरुले नेकपा भन्ने पार्टी बनाउनुभयो । त्यही दिनबाट नेपालमा ओलीतन्त्रको जग हालिएको हो । हामी यत्रो संसद्मा लड्यौँ । राष्ट्रपतिका बारेमा चर्चा भएको छ । राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को संविधानका धाराहरुको उल्लंघन गर्नुभयो । राष्ट्रपति रानी बन्न खोज्नुभयो । हामी कतिपटक बोल्यौँ । तपाईंहरु (माधव नेपाल–प्रचण्ड) कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? संसद्मा सभामुख मात्र हुनुहुन्छ ।
उपसभामुख अर्को पार्टीको रोज्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । तपाईंहरुले ढाकछोप नगर्नुस् । तपाईंहरुको पार्टी एक भइसक्यो, उपसभामुख छोड्नुस् भन्दै गर्दा तपाईंहरुले कति रकमी कुरा गर्नुभयो ? हिजो अदालत नचाउनुस् भनेको होइन ? आज अदालतले के गर्ला भनेर रुनुपरेको छ । हिजो निर्वाचन आयोगमा पार्टीको कार्यकर्ता नियुक्त नगरौँ भनेको होइन ? बोल्नुभयो तपाईं ? आज मसँग बहुमत हुँदै गर्दा पनि निर्वाचन आयोगले मेरो कुरा सुनेन भनेर रुँदै बस्नुपरेको छ । हामीले यी कुरा भन्दै गर्दा पुष्पकमल दाहाल तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? मनको लड्डु खाएर बस्नुभएको थियो ।
किनकि यो दुईवटा पाइलट भएको प्लेन केही समयपछि म एक्लैले चलाउने हो भन्ने लागेको थियो । कामरेड माधव नेपाललाई के लागिरहेको थियो ? अब यस्तो समय आउनेछ, जुन बेला सबै पूर्वएमाले एक ठाउँमा आउनेछन् र त्यसपछि यो पार्टी मेरो हुनेछ । तपाईंहरुको त्यही लालचले साढे दुई वर्षसम्म कांग्रेस एक्लै लड्यो ।
संसद्मा लड्यो, सडकमा लड्यो । कांग्रेसले त वैशाख १७ गते निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्री ओलीले शासन गर्ने नैतिकता गुमाइसकेका छन् भनेर बोलेको हो । उहाँलाई फेर्नुस् भनेको । मैले त तीन वर्षअघि संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर भनेको प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेक गर्नुहोला । प्रधानमन्त्री ओलीभित्र तानाशाह बन्ने महत्वाकांक्षा छ भनेर मैले भन्दै गर्दा संसद्मा मलाई उडाएको सम्झन्छु । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले भर्खर एउटा ‘नानी सांसद्’ले आएर मेराबारेमा धेरै कुरा भन्नुभयो, घर गएर राम्रोसँग सुत्नुस्, चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्दै गर्दा टेबल ठोक्ने बेलामा को को हुनुहुन्थ्यो ? स्मरण गर्नुस् । यो हाम्रो विषय होइन । मैले प्रसंगवश मात्र कोट्याएँ ।
यो बेलामा संविधान मिचिएको छ । ठिक ठाउँमा ल्याउने हाम्रो विषय हो । संविधानलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने भनेको संसद् पुनःस्थापना गर्ने हो । संसद् पुनःस्थापित भएपछि त्यसले जाने फेरि चुनावमै हो । चिन्ता नगर्नुस्, जाने चुनावमै हो । चुनाव आउँछ । तर, सही बाटोबाट आउँछ । प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ताले चुनावको तयारी नगर्ने भनेको होइन, गर्नुस् ।
सही तरिकाबाट आउने चुनावको प्रतीक्षा गर्नुस् । जनतामा गएर भन्नुस्, देश भड्खालोमा जाने अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पु¥याएको छ । तर, कांग्रेस जिउँदै छ, कांग्रेसले सम्हाल्छ । संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउँछौँ । संसद् पुनःस्थापना गर्छौं । त्यो संसद्बाट सम्हालेर देशलाई चुनावमा लैजान्छौँ । चुनाव जितेर आउँछौँ । जितेर आएपछि आम जनताको सवाल छ, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा यी तमाम मुद्दा छन् ।
त्यसको हल लिएर कांग्रेस आउँछ भनेर जनतालाई आश्वस्त गर्नुस् । सूर्य चुनाव चिह्न कता जान्छ, चिन्ता नगर्नुस् । एकातिर सूर्य ढाक्न बादल उभिनुभएको छ, अर्कोतिर प्रचण्ड गर्मी पहिल्यै भएको ठाउँमा सूर्य जाँदै गर्दा गर्मी झन् बढ्नेवाला छ । जता सूर्य गए पनि जनता दौडेर योपटक रुखको छहारीमा आउने हो । तर, हामी ठिक ठाउँमा उभिएर सही निर्णय गरेर बस्नुपर्छ ।
जनतालाई भरोसा दिएर बस्यौँ भने त्यही तागतले भोलिको मत पनि आर्जन गर्छ । यही नै आजको आवश्यकता हो ।
(कांग्रेसले शनिबार मेलम्चीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा थापाले व्यक्त गरेको विचारको अंश)